အိန္ဒိယမှာ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုးဖြင့် ကုသပေးမှု ရလဒ်ကောင်းထွက်ပေါ်
ဒေလီပြည်နယ်မှာ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် စမ်းသပ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် စမ်းသပ်ကုသပေးခဲ့ရာ အခြေအနေတိုးတက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
(ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Kejriwal နှင့် ဒေါက်တာ S.K. Sarin) (Photo: ANI)
ဒေလီပြည်နယ်မှာ အသည်းအသန် အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် ကုသပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်း Drug Controller General of India က ဒေလီပြည်နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါပြင်းထန်နေတဲ့ လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် စမ်းသပ်ကုသရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေလီကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 လူနာလေးဦးကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက် အင်္ဂါနေ့ (ဧပြီ ၂၁ ရက်) နေ့က ကုသပေးခဲ့တဲ့ လူနာနှစ်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာပြီး ယမန်နေ့ (ဧပြီ ၂၄ ရက်) မှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှ ပုံမှန်ဆေးရုံလူနာဆောင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်စီစဥ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် ကုသပေးခဲ့တဲ့ အခြား လူနာနှစ်ဦးဟာလည်း တိုးတက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါမှ ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ထိုရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပဋိပစ္စည်းများထွက်လာပါတယ်။ ထိုပဋိပစ္စည်းများကို ရောဂါမှပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ လူနာများထံကနေ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ရောဂါပြင်းထန်နေတဲ့ လူနာများကိုသွင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ထုတ်ရေးမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 အခြေအနေ ဒုတိယအဆင့်အဖြစ် အဆုတ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာကို သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် ကုသပေးပါက ဗိုင်းရပ်စ်သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ရောဂါအခြေအနေ တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း Institute of Liver and Biliary Sciences ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ S.K. Sarin က ပြောပါတယ်။
(သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းနေသူတစ်ဦး) (Photo: @civilhospamd/Twitter)
သို့သော် သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဟာ အကန့်အသတ်ရှိနေကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုပါတယ်။ ကုထုးအတွက် လိုအပ်တဲ့သွေးရည်ကြည်ကို COVID-19 ကနေ ပြန်လည်သက်သာပြီး နေအိမ်မှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်နေထိုင်တဲ့ လူနာထံမှ ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ S.K. Sarin က ရှင်းပြပါတယ်။ ထိုအခြေအနေအရ ပြည်လည်သက်သာသွားတဲ့ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်များ လှူဒါန်းစေလိုကြောင်း ဒေါက်တာက ပြောခဲ့ပါတယ်။
"COVID-19 ကနေ ပြန်သက်သာသွားသူတွေကို သွေးရည်ကြည် လာရောက်လှူဒါန်းကြစေချင်ပါတယ်၊ ဒါက သွေးလှူတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ပဋိပစ္စည်းကိုပဲ ထုတ်ယူလိုက်တာပါ" လို့ ဒေါက်တာ S.K. Sarin က ပြန်လည်သက်သာသွားသူတွေ နားလည်မှုလွဲနေနိုင်တဲ့အချက်ကို ရှင်းပြရင်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုးဖြင့် စမ်းသပ်ကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကနဦး ရလဒ်များသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို အချိန်တစ်ခုအထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဒေလီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Kejriwal က ပြောပါတယ်။ ဒေလီပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းရှိ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 လူနာတွေကို သွေးရည်ကြည်ကုထုးဖြင့် ကုသခွင့်ပြုရန် ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးအရကို လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်း တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ Kejriwal က ဆိုပါတယ်။
လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလီယံရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ယနေ့ (ဧပြီ ၂၅ ရက်) မွန်းလွဲပိုင်းအထိ COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၂၄,၅၃၀ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၇၈၀ ဦးနဲ့ ပြန်လည်သက်သာသူ ၅,၄၉၈ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေလီဟာ အိန္ဒိယမှာ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အဆိုးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေပြီး COVID-19 လူနာ ၂,၄၀၀ နီးပါးနဲ့ သေဆုံးသူ ၅၀ ဦးထက်မနည်းရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
Source: India Today, Sputnik News